Ndingazabelana njani ngeZimvo kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingabelana njani ngezimvo kwiPinterest?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 311
Kungokwemvelo ukuba xa ubona umbono okanye iprojekthi, umfanekiso ukhumbuza ngokukhawuleza umntu othile kwaye ke ngoko ufuna ukwabelana nabo. Enkosi kuhlaziyo lwenethiwekhi kunokwenzeka ukwenza lo msebenzi ngexeshana elifutshane kunye nomgangatho wokugcina abasebenzisi.
IPinterest lelinye lamaqonga aphuculweyo ngokuhamba kwexesha kwindawo yokunxibelelana. Mva nje abasebenzisi bafuna ukuvelisa umxholo ongcono kunye nangaphezulu ngaphakathi kwezonxibelelwano zentlalo kunye nayo, ngaphandle kwamathandabuzo, bazingcambu ngokwabo phakathi kweyona nto bafuna ukuyenza ukubonisa umxholo wabo.
Ngeli xesha, ungafunda amanye amaqhinga ePinterest njengomzekelo wokwabelana ngezimvo eziphambili kwiPinterest. Iimfihlo ezincinci ziya kuba kwi-ajenda yokukunceda ujonge ukuveliswa kwezithuba eziza kukuthatha inyathelo eliya phambili xa kufikwa ekwabelaneni ngezimvo ngempumelelo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukubonakala kwePinterest namhlanje kunike abantu isibonelelo esingenakuguqulwa ngokuhamba kwexesha. Uhlobo loncedo olunikwa leli qonga kubo bonke abantu ukuvelisa unxibelelwano olukhulu ngakumbi nangaphezulu kwako konke, ukuya yabelana ngeziphumo ezingcono.
Yintoni ibhokisi yebhokisi yePinterest?
Njengalo naliphi na iphepha kwimidiya yoluntu, abantu banamandla okwabelana ngezithuba okanye ukunxibelelana ngetreyi. Olu hlobo lwendawo ngaphakathi konxibelelwano lwenzelwe ukuvelisa unxibelelwano olungcono phakathi kwabasebenzisi.
Oko kukuthi, ukuba unayo ipini okanye ibhodi ofuna ukuyenza esidlangalaleni okanye ushiye uphawu kumdali okanye komnye umsebenzisi, kunokuba kule ndawo.
Amanyathelo okungena kwitreyi yePinterest
Ngenisa iqonga lePinterest ngokubhalisa okanye kuGoogle
Yiya kwicala lasekunene kwiphepha
Khetha i icon ezintathu zamachaphaza kwaye uqalise ukwabelana
Ukuba uyazi igama lomsebenzisi lomhlobo wakho kwiPinterest, usenokungachithi ixesha elininzi ukhangela into oyifunayo. Nangona kunjalo, ukuba awazi kakuhle into oyikhangelayo, ungathatha ixesha elide kwiphepha.
Nje ukuba unayo yonke idatha onayo, ungaqala ukuthumela umyalezo ngaphandle kokuhlasela okanye ukuphazamisa umsebenzi wabanye abantu.
Amanye amaqhinga ePinterest
Ukuze ufunde okungakumbi ngeqonga, kulungile ukuba uyazi amanyathelo asisiseko ephepha akunika lona ukusebenza ngakumbi xa uyisebenzisa.
Ngenisa amagama aphambili
Xa kuziwa ekuqinisekiseni izithuba, into enye eya kusebenza kuqala kukubeka amagama aphambili emfanekisweni. Oku kuya kukunceda ufumane iziphumo ezingcono kwizithuba zakho.
Khetha umxholo osekwe kwizihloko
Xa ungena kwiPinterest kunyanzelekile ukuba ufake injongo ecwangcisiweyo osoloko ufuna ukuyikhangela. Oku ngaphandle kwamathandabuzo ixesha lokufumana liya kuncipha yezinto ofuna ukuvela kuzo kumaphepha.
1 Inbox kwiPinterest
1.1 Yintoni ibhokisi yebhokisi yePinterest?
1.2 Amanyathelo okungena kwitreyi yePinterest
2 Amanye amaqhinga ePinterest
2.1 Ngenisa amagama aphambili
2.2 Khetha umxholo osekwe kwizihloko
Uyenza njani ipini yePinterest kwifowuni yam ephathekayo?